Warbixin: Sababaha Kalabbar Wasiirrada R.W Kheyre Ay Shaqada Uga Tageen | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Warbixin: Sababaha Kalabbar Wasiirrada R.W Kheyre Ay Shaqada Uga Tageen
Warbixin: Sababaha Kalabbar Wasiirrada R.W Kheyre Ay Shaqada Uga Tageen
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre tan iyo markii xukuumadda uu soo magacaabey 21-kii March sanadkii hore, waxaa wasiirradiisa sababo kala duwan uga tagay kalabbar, sidaas ay tahay wasiirrada kuma tagin howl gudasho la’aan, si shaqada loo hagaajiyo ama xataa dadka iyaga ka fiican loo keenno, intooda badan waxaa ay ku baxeen khilaafaad kala dhaxeeya wasriirka 1aad ama bulshada rayidka ah.
Haddaba Akhriso, Sababaha Ay Wasiirrada Kheyre Kala-ubar U Tageen.
Feb 23, 2017: Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ra’isul wasaare u magacaabay Xasan Cali Kheyre oo ka tirsanaa milkiilayaasha Soma Oil and Gas.
March 21, 2017: Ra’isul Wasaare Kheyre ayaa magacaabay 68 wasiir, 8 ayaa haween ahaa, waxaa kale oo ku jiray 15 wasiiru dowle, 26 wasiir, 26 ku-xigeen, wasiiradaas 42 Xildhibaanno ahaa.
April 1, 2017: Waxaa kalsooni heshay xukuumadda Ra’isul wasaare Cali Kheyre, iyada oo si toos ah shaqadeeda u bilowday.
May 3, 2017: Wasiirkii Howlaha guud iyo dib u dhiska Xil. Cabaas Cabdullahi Sheekh Siraaji ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho, geeridiisa kadib waxaa su’aalo laga keenay amniga wasiirka sida uu ahaa!
October 12, 2017: Cabdirashid Cabdullahi Maxamed oo ahaa wasiirka Gashaandhigga Soomaaliya ayaa istiqaaladiisa u gudbiyay ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, waxaa uu ka sheegtay shaqo la’aan iyo in howlihiisa cid kale isla qabato!
November 15, 2017: Wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Maryan Qaasim Axmed ayaa waxay iska casishay xilkaasi. Wasiirka waxaa lagu dul sameeyay guddiyo iyo hey’ado qabanayey shaqadeeda, waxaa ka dhamaaday dul-qaadkii!
November 26, 2017: Waxaa xilka laga qaaday wasiirka Diinta iyo Awqaafta xukuumadda Soomaaliya Iiman Cabdullahi Cali, lama shaacin wax sabab ah.
January 4, 2018: Ra’isul wasaare Xasan Kheyre ayaa shaqada ka ceyriyay 3 wasiir oo kala ah: wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga calamiga Yusuf Garaad,, Wasiirka warshadaha iyo ganacsig Khadra Axmed Ducaale, iyo wasiirka arrimaha gudaha federalism-ka Cabdi Farah Saciid“Juxa”, Yusuf Garaad marka laga reebo, labada kale waa hareeyay khilaaf, gabadha waxaa ay isku dhaceen rugta ganacsiga halka Juxa ay si shaskhsi ah isku fahmi waayeey Kheyre!
Wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha oo qoraal soo saaray waxaa ay sheegeen in aan loo sheegin xilka qaadista taas oo protocol ahaan hadal badan laga keenay, waxaa kale oo ay soo jeediyeen arrimo muhiim u ah jiritaanka dowladnimada.
Cabdi Farax Juxa waxaa uu isna ku dardaraamay “Dalku waa Federaal, taladu waa wadaag, danteenuna waa isku tolan tahay, xataa haddii fekerka lagu kala duwan yahay”.
January 21, 2018: Cabdiraxmaan Yarisow oo ahaa wasiirka warfaafinta ayaa loo magacaabey guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho,
April 24, 2018: Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed MursalShiikh C/raxmaan , waxaa uu murashax u ahaa afhayeenka baarlamaanka.
April 24, 2018: Wasiirka Tamarta Saalim Caliyow Ibrow, waxaa uu isku casilay tartanka afhayeenka golaha shacabka.
Waxaa kale oo isla sababtaas xukuumadda Kheyre uga tagay Ibraahim Isaaq Yarow(Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta), Cali Sheekh Maxamed Nuur(wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo federaalka), Cabdi Casis Xasan Maxamed(wasiiru dowlaha warfaafinta).
May 2018: Wasiirka wasaradda howlaha Guud & Dib u dhiska xukumadda soomaaliya Eng saadiq abdulaahi cabdi ayaa ka mid ah wasiirada la ceyriyay.
July 9, 2018: Qoraal ka soo baxay xafiiska Kheyre ayaa shaqada loo ceyriyay wasiirka diinta iyo awqaafka Xasan Macalin Xuseen. Wasiirka waxaa uu sababsaday arrimaha xajka, maareynta, lacagta iyo cidda qaadeysa xujeyda.
July 26, 2018: Wareegto kasoo baxday xafiiska Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa xilkii waxaa looga qaaday wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka C/raxmaan Daahir Cusmaan. Wasiirka waxaa lagu ceriyay kadib markii uu sheegay in wasaaradiisa aaney aqoonsaneen jaamacadaha dalka.
Next articleWareysiyada iyo u diyaar garoow la’aanta Mas’uuliyiinta.